VaTanzania vashanyi vanokurudzira hurumende: Gamuchirai varidzi vemapasipoti egirini
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » VaTanzania vashanyi vanokurudzira hurumende: Gamuchirai varidzi vemapasipoti egirini
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Investments • nhau • Kuvakazve • Tanzania Breaking News • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Tanzania vashanyi vekushanya vari kunetseka
Tanzania Association of Tour Operators (TATO) iri kunetsekana kuti hurumende igadzirise zvirango zvitsva zveCOVID-19 kuchengetedza chibvumirano chayo chekuda nevamiriri vekufambisa veIsrael kuti vaunze zviuru zvevashanyi vane mbiri-yepamusoro.
Tanzania yakwidziridza nekusimudzira matanho ekudzivirira, kunyanya ayo ane chekuita nekufamba kwenyika.
VaIsrael vamiriri vekufamba vanotarisira kuunza vangangoita zviuru zviviri vanozorora muna Nyamavhuvhu naGunyana 2,000.
Vashanyi vekuTanzania vari kuda kuti hurumende ibvise zvirambidzo kune vane mapasipoti egreen nechikonzero chekuti vashanyi ava vakabayiwa nhomba.
Vanotungamira Israel Travel Agents, avo vanoronga kuunza vangangoita zviuru zviviri zvepamusoro-zvevashanyi vanopinda munzvimbo yekuchamhembe kweTanzania safari mudunhu mumwedzi miviri kubva muna Nyamavhuvhu 2,000, vakanyora tsamba kuTATO vachida kunyengetedza hurumende kuti ibvise zvimwe zvinorambidzwa kuvashanyi vavo vari green passport vanobata nezvikonzero zvekuti vashanyi vavo vakabayiwa nhomba uye nekudaro hapana chikonzero chekuwedzera matanho kwavari.
Kubva pane yepasi rose epidemiological mamiriro uye kubuda kwemhando dzakasiyana dzehutachiona hunokonzera COVID-19, Tanzania yakasimudzira nekusimudzira matanho ekudzivirira, kunyanya ayo ane chekuita nekufamba kwenyika.
Mukumutsiridza iyo Yekufambisa Advisory Nha. 6 yaMay 3 kusvika panhamba Nha. 7, kubva muna Chivabvu 4, 2021, hurumende yakaraira kuti vafambi vese, vangave vatorwa kana vagari vanodzoka, vanopinda muTanzania vachatariswa kuongororwa kweECVID- 19 hutachiona kusanganisira nekukurumidza bvunzo.
Mukuru weTATO VaSirili Akko vakati mubatanidzwa wavo uri muhurukuro yepamusoro nehurumende nezvenyaya iyi kuti vawane mhinduro yavanofunga kuti ichavhurirawo vamwe varidzi vemapasipoti akasvibirira kubva kune dzimwe nyika kuti vashanyire nyika.
“Kuziva bhizinesi rekushanya vakakundwa nedenda, zvinotarisirwa ndezvekuti chero munhu ari kuunza bhizinesi achagamuchirwa nekapeti tsvuku, uye hapana chikonzero chekuti vafambi veIsrael vafunge nezve dzimwe nzvimbo, ”akadaro.
Vamiririri, avo vanotarisira kuunza vangangoita zviuru zviviri vachengeti vemazororo muna Nyamavhuvhu naGunyana 2,000, vanoda kuti vashanyi vakabaiwa majekiseni kubva kuIsrael vakwanise kuwana mahotera, maresitorendi, uye zvinokwezva, vasina kuongororwa, VaAkko vakatsanangura.
Mai Tali Yativ, CEO wesangano repamusorosoro rinoshanda mukushanya kweprimiyamu muIsrael, iyo Spirit Extraordinary Travel, anoti anoronga akasarudzika mwedzi miviri yeTel Aviv - Kilimanjaro International Airport charter ndege nevashanyi vekumusoro-soro 2 mumwe nemumwe muna Nyamavhuvhu naGunyana 56, asi chete kana hurumende ikaziva mapasipoti avo egirini.
"Tiri kuronga ndege mbiri muna Nyamavhuvhu naSeptember 2 chete kune [kuchamhembe kweTanzania safari dunhu uye vatengi vedu vachapedza mazuva masere vari munyika, asi isu tiri kunetsekana nezviri kudiwa nedunhu reCOVID-2021," Mai Yativ vakanyorera. mukuru weTATO.
Akakumbira TATO kutaurirana nehurumende kuti ibvumidze vashanyi veIsrael vakabaiwa jekiseni nemapasipoti akasvibira kuti vapinde uye vabve vasina kuongororwa.
Kuna Terry Kessel, Managing Director weDiesenhaus Travel Israel, anga achiunza vashanyi munyika kwemakore makumi maviri, akatsvagawo neTATO kuti vapedzise hurukuro nehurumende kuti vabvumidze kuunza mhirizhonga kubva kuJerusarema.
“Kuedza kwedu kuunza vashanyi kuTanzania kuchangobva kukanganiswa, nekuda kwemitemo mitsva yekuedza yeTanzania COVID-19. Vatengi vedu vari kufunga kukanzura marwendo avo nekuda kwenzira iriko, "VaKessel vakanyorera TATO.
"Pasina kurerutsa zvinodiwa zveCOVID-19 zvemuno, chirongwa chekuda kuunza mhirizhonga dzevashanyi veIsrael chinokundikana," VaKessel vakadaro.
Nhamba dzepamutemo kubva kuTanzania Tourist Board (TTB) dzinoratidza kuti vashanyi kubva kuIsrael vaingova 3,000 chete muna 2011. Huwandu hwacho hwakawedzera kusvika pa4,635 muna2012 uye zvakapetwa katatu kusvika kuvashanyi zviuru gumi nezvishanu muna15,000.
Munguva pfupi yemakore mashoma, Israel yakarova kusvika pachinhanho chechitanhatu chemakambani anotungamira evashanyi kuTanzania kusati kwatanga denda repasi rose re COVID-19.
United States ndiyo yave iri nzvimbo inotungamira yevashanyi vanosvika miriyoni imwe neshanu vanoshanyira nyika gore rega rega zvichiteverwa neUnited Kingdom, Germany, Italy neIndia.
TATO, pasi pekutsigirwa neUnited Nations Development Programme (UNDP), parizvino iri kushandisa "Tourism Recovery Strategy" yayo kubatsira kukurudzira bhizinesi, kudzorera zviuru zvemabasa akarasika, uye kuunza mari kuhupfumi.
Inomiririra vanopfuura mazana matatu vevashanyi, TATO inzvimbo inotungamira yekudyira indasitiri yekushanya muTanzania iyo inowana madhora mazana maviri nemazana maviri nemashanu emadhora pagore ehupfumi, zvakaenzana ne300 muzana yeGDP yenyika.